Ụbọchị Ikpe—Gịnị Ka Ọ Bụ? - Naanị Ebe A Ka Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n'Ịntanet
GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Assamese Ateso Australian Sign Language Aymara Bambara Baoule Basque Bengali Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Boulou British Sign Language Bulgarian Cakchiquel (Central) Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuukese Chuvash Cibemba Costa Rican Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language French French Sign Language Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Guna Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Hungarian Sign Language Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Japanese Sign Language Jula Kabiye Kabyle Kalenjin Kannada Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kongo Konkani (Roman) Korean Korean Sign Language Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Laotian Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Low German Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mapudungun Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mende Mexican Sign Language Mingrelian Miskito Mixe Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Niuean Norwegian Nuer Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Palauan Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Rarotongan Romanian Rotuman Runyankore Russian Russian Sign Language Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tuvinian Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Arabic) Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Wolof Xhosa Yapese Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zimbabwe Sign Language Zulu
Ụbọchị Ikpe—Gịnị Ka Ọ Bụ?
OLEE ihe na-agbata gị n’uche ma ị nụ banyere Ụbọchị Ikpe? Ọtụtụ ndị na-eche na ọtụtụ ijeri mmadụ ga-abịa otu otu n’ihu ocheeze Chineke. Ha rute n’ebe ahụ, e kpee onye nke ọ bụla ikpe. A ga-eji ndụ eluigwe dị ụtọ kwụọ ụfọdụ ndị ụgwọ, a ga-amakwa ndị ọzọ ikpe ịta ahụhụ ebighị ebi. Otú ọ dị, ihe Bible na-akọwa banyere oge ahụ dị nnọọ iche. Okwu Chineke na-akọwa ya dị ka oge olileanya na nke mweghachi, ọ bụghị dị ka oge na-emenye egwu.
Ná Mkpughe 20:11, 12, anyị na-agụ otú Jọn onyeozi si kọwaa Ụbọchị Ikpe: “M wee hụ otu nnukwu ocheeze ọcha na onye na-anọkwasị na ya. Eluigwe na ala gbapụrụ n’ihu ya, ọ dịghịkwa ebe a hụrụ maka ha. M wee hụ ndị nwụrụ anwụ, ndị ukwu na ndị nta, ka ha na-eguzo n’ihu ocheeze ahụ, e meghekwara akwụkwọ mpịakọta dị iche iche. Ma e meghere akwụkwọ mpịakọta ọzọ; ọ bụ akwụkwọ mpịakọta nke ndụ. E kpekwara ndị nwụrụ anwụ ikpe site n’ihe ndị ahụ e dere n’akwụkwọ mpịakọta ndị ahụ dị ka omume ha si dị.” Ònye bụ onyeikpe a kọwara n’ebe a?
Jehova Chineke bụ Onyeikpe kasịnụ nke ihe a kpọrọ mmadụ. Otú ọ dị, a bịa n’ọrụ ikpe ahụ n’onwe ya, o nyefere ya onye ọzọ. Dị ka Ọrụ Ndị Ozi 17:31 si kwuo, Pọl onyeozi kwuru na Chineke ‘esetịpụwo otu ụbọchị nke ọ na-ezube ikpe elu ụwa mmadụ bi ikpe n’ezi omume site n’aka otu nwoke onye ọ họpụtaworo.’ Onyeikpe a a họpụtara bụ Jizọs Kraịst. (Jọn 5:22) Otú ọ dị, olee mgbe Ụbọchị Ikpe ga-amalite? Ogologo oge hà aṅaa ka ọ ga-ewe?
Akwụkwọ Mkpughe na-egosi na Ụbọchị Ikpe ga-amalite mgbe agha Amagedọn gasịrị, bụ́ mgbe a ga-ebibi usoro ihe nke Setan nwere n’ụwa.* (Mkpughe 16:14, 16; 19:19-20:3) Mgbe Amagedọn gasịrị, a ga-atụ Setan na ndị mmụọ ọjọọ ya mkpọrọ n’ime abis ruo otu puku afọ. N’oge ahụ, 144,000 ahụ, bụ́ ndị ha na Kraịst ga-eketakọ ihe n’eluigwe, ga-abụ ndị ikpe, ha ga-esorokwa “Kraịst ahụ chịa dị ka ndị eze ruo otu puku afọ.” (Mkpughe 14:1-3; 20:1-4; Ndị Rom 8:17) Ụbọchị Ikpe ahụ abụghị ihe omume a ga-eme ọkụ ọkụ nke ga-ewe nanị awa 24. Ọ ga-ewe otu puku afọ.
N’ime otu puku afọ ahụ, Jizọs Kraịst ‘ga-ekpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe.’ (2 Timoti 4:1) “Ndị dị ndụ” ga-abụ “oké ìgwè mmadụ” ndị ga-alanarị Amagedọn. (Mkpughe 7:9-17) Jọn onyeozi hụkwara “ndị nwụrụ anwụ…ka ha na-eguzo n’ihu ocheeze” nke ikpe. Dị ka Jizọs kwere ná nkwa, ‘ndị nọ n’ili ncheta ga-anụ olu [Kraịst] wee pụta’ site n’ibilite n’ọnwụ. (Jọn 5:28, 29; Ọrụ 24:15) Ma gịnị ka a ga-adabere na ya kpee mmadụ nile ikpe?
Dị ka ọhụụ Jọn onyeozi hụrụ na-egosi, ‘e meghere akwụkwọ mpịakọta dị iche iche, kpeekwa ndị nwụrụ anwụ ikpe site n’ihe ndị ahụ e dere n’akwụkwọ mpịakọta ndị ahụ dị ka omume ha si dị.’ Akwụkwọ mpịakọta ndị a hà bụ ihe ndekọ nke ihe ndị mmadụ mere n’oge gara aga? Ee e, ikpe ahụ agaghị adabere n’ihe ndị mmadụ mere tupu ha anwụọ. Olee otú anyị si mara? Bible na-ekwu, sị: “A tọhapụwo onye nwụworo anwụ ná mmehie ya.” (Ndị Rom 6:7) N’ihi ya, ndị a kpọlitere n’ọnwụ agaghị enwe ntụpọ, dị ka a pụrụ isi kwuo ya. Ya mere, ọ ghaghị ịbụ na akwụkwọ mpịakọta ndị ahụ na-anọchi anya ihe ndị Chineke chọkwuru n’aka ụmụ mmadụ. Iji dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi, ndị lanarịrị Amagedọn nakwa ndị a kpọlitere n’ọnwụ aghaghị irube isi n’iwu Chineke, gụnyere ihe ọhụrụ ọ bụla Jehova ga-achọ n’aka ndị mmadụ, bụ́ ihe ndị ọ pụrụ ime ka a mata n’otu puku afọ ahụ. N’ihi ya, a ga-ekpe ndị mmadụ ikpe n’otu n’otu dabere n’ihe ha mere n’ime Ụbọchị Ikpe ahụ.
N’Ụbọchị Ikpe ahụ, ọtụtụ ijeri mmadụ ga-enwe ohere na nke mbụ ya ịmata banyere uche Chineke na ibi ndụ n’ụzọ kwekọrọ na ya. Nke a pụtara na a ga-enwe ọrụ izi ihe dị ukwuu. N’ezie, ‘ezi omume ka ndị bi n’elu ụwa dum mmadụ bi ga-amụta.’ (Aịsaịa 26:9) Otú ọ dị, ọ bụghị mmadụ nile ga-adị njikere ibi ndụ n’ụzọ kwekọrọ n’uche Chineke. Aịsaịa 26:10 na-ekwu, sị: “A sị na e meere onye na-emebi iwu amara, ọ gaghị amụta ezi omume; n’ala nke izi ezi nile ọ ga-eme ajọ omume, ma ọ gaghị ahụ ịdị elu nke Jehova.” N’Ụbọchị Ikpe ahụ, a ga-egbu ndị ajọ omume a, ha agaghị enwekwa olileanya mbilite n’ọnwụ.—Aịsaịa 65:20.
Ka ọ na-erule n’ọgwụgwụ nke Ụbọchị Ikpe ahụ, ndị lanarịrịnụ ‘ga-abịaworị dịrị ndụ’ n’ụzọ zuru ezu dị ka ndị zuru okè. (Mkpughe 20:5) N’ihi ya, n’Ụbọchị Ikpe ahụ, a ga-eme ka ihe a kpọrọ mmadụ zughachi okè dị ka ha zuru na mbụ. (1 Ndị Kọrint 15:24-28) Ule ikpeazụ ga-ewerezi ọnọdụ. A ga-atọhapụ Setan na mkpọrọ ma hapụ ya ka ọ gbalịa iduhie ihe a kpọrọ mmadụ na nke ikpeazụ ya. (Mkpughe 20:3, 7-10) Ndị guzogidere ya ga-ahụ mmezu zuru ezu nke nkwa Bible bụ́: “Ndị ezi omume ga-enweta ala, birikwa n’elu ya ruo mgbe ebighị ebi.” (Abụ Ọma 37:29) Ee, Ụbọchị Ikpe ga-ewetara ihe nile a kpọrọ mmadụ na-ekwesị ntụkwasị obi ngọzi!
* Banyere Amagedọn, biko lee Ụlọ Nche nke May 15, 1990, peeji nke 3-7, nakwa isi nke 20 nke akwụkwọ bụ́ Fee Onye Nanị Ya Bụ Ezi Chineke ahụ Ofufe, ọ bụ Ndịàmà Jehova bipụtachara ha.
Gịnị Ka “Ọgwụgwụ Ụwa” Pụtara?
Ị̀ ma na ihe Baịbụl kwuru gbasara “ọgwụgwụ” bụ ozi ọma?
Text Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu Gịnị n’Ezie Ka Bible Na-akụzi?